कन्सोलहरूमा रमाइलो गर्न डराउने VR खेलहरू | मोबाइल फोरम
डेनियल टेरासा | 21/11/2021 09:00 | खेल
डराउने विधाका प्रेमीहरूले दशकौंदेखि रोमाञ्चक र डरलाग्दो फिल्म अनुभवहरूको आनन्द उठाएका छन्। त्यसपछि तिनीहरू भिडियो गेमहरूको लागि डरलाग्दो चिच्याउन जारी राख्न सक्षम भए। अब, एक नयाँ र शानदार छलांग आउँछ: डर र एड्रेनालाईन अर्को स्तरमा लगियो: भर्चुअल वास्तविकता। यहाँ समीक्षा गरौं सबै भन्दा राम्रो डरावनी VR खेलहरू.
चेतावनीको एक शब्द: यी VR खेलहरू अत्यधिक संवेदनशील मानिसहरूका लागि उपयुक्त छैनन्। होइन, यो कुनै अतिशयोक्ति होइन। ती संवेदनाहरू VR टेक्नोलोजी तिनीहरू यति जीवन्त छन् कि हामी तिनीहरूलाई सत्यको लागि लिनेछौं। यसैले डरलाग्दो VR खेलहरू क्लासिक फ्ल्याट स्क्रिन खेलहरू भन्दा डरलाग्दो छन्।
यसो भन्दै, हामी तल प्रस्तुत गर्दछौं त्यहाँ डरलाग्दो भर्चुअल वास्तविकता खेलहरूको सूची हाल। सबै सूचीहरू जस्तै, यो एक अपूर्ण चयन हो। त्यहाँ ती व्यक्तिहरू हुनेछन् जसले एक भन्दा बढि उपाधि छुटेका छन् र अरू जसले सोच्नेछन् कि सबै छानिएकाहरू (कुलमा आठ छन्), त्यहाँ हुन योग्य छैनन्। यसमा कुनै शंका छैन कि तिनीहरू सबैमा हामीलाई धेरै राम्रो-नराम्रो समय दिन सक्ने विकृत क्षमता छ। के तपाईं तिनीहरूलाई सामना गर्न पर्याप्त साहसी हुनुहुन्छ?
1 असाधारण गतिविधि: हराएको आत्मा
2 एलियन: अलगाव
3 ब्लेयर डाइच
4 घुसपैठिए: लुकाउनुहोस् र खोज्नुहोस्
5 निवासी ईविल एक्सएनएमएक्स: बिहाहार्ड
7 द हिड्ने मृत - संत र पापीहरू
8 दिउँसो सम्म: रगतको रस
असाधारण गतिविधि: हराएको आत्मा
juego Paranormal Activity चलचित्र सागाबाट प्रेरित। हामी "प्रेरित" भन्दछौं किनभने कथानक मौलिक भन्दा टाढा छ (यहाँ हामीले राक्षसी सम्पत्ति र भूत कथाहरू पाउँछौं), यद्यपि यसले यसको सौन्दर्य र लय कायम राख्छ। यदि केहि छ भने, खेलले हामीलाई डराउने र हामीलाई दुःस्वप्नमा डुबाउने वाचा राख्छ।
को साहसिक असाधारण गतिविधि: हराएको आत्मा हामीलाई आवासीय छिमेकको सामान्य घरमा लैजान्छ। सबै कुरा एक वा दुई घण्टाको अन्तरिक्षमा हुन्छ जसमा तपाईंले कोरिडोर र कोठाहरूमा लुकेका रहस्यहरू र पजलहरू समाधान गर्नुपर्दछ। अन्धकार निसास्सिरहेको छ र खतराहरू प्रत्येक ढोका पछाडि वा सबैभन्दा अप्रत्याशित कुनामा लुकेका छन्।
सबैमा, यो एक अपेक्षाकृत ठोस VR डरावनी खेल हो। यसमा आतंकको बलियो भावना छ र ध्वनि र प्रकाशको उत्कृष्ट प्रयोगको लागि एक घना वातावरण विकसित भएको छ। यसको मात्र कमजोर बिन्दु एक नियन्त्रण प्रणाली हो जुन सुधार गर्न सकिन्छ। PlayStation VR (PSVR) र Steam को लागि PSN मा उपलब्ध छ।
अन्तरिक्षको गहिराइमा भर्चुअल वास्तविकतामा डरावनी
यद्यपि यो भर्चुअल रियालिटी गेम होइन, तर एलियन VR मोड: अलगाव हाम्रो सूचीमा छुटाउन धेरै राम्रो छ। यो एक डरलाग्दो क्लासिक पनि हो र निस्सन्देह आइकोनिक साइ-फाई डरावनी चलचित्र फ्रन्चाइजमा आधारित खेलहरू मध्ये उत्कृष्ट हो। कम्तिमा आज सम्म।
तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, खेलको मेकानिक्स डरलाग्दो र खतरनाक xenomorphic प्राणीहरूबाट भाग्नमा आधारित छ। यदि तपाईंले गाथामा फिल्महरू हेर्नुभयो भने, तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि शटहरू कहाँ जान्छन्। भाग्नुहोस्, लुक्नुहोस्, सास रोक्नुहोस् ... डरको भावना विचलित रूपमा वास्तविक छ।
ब्लेयर विचको डरलाग्दो जंगलमा फर्कनुहोस्
फिल्मको अप्रत्याशित सफलता ब्लेयर विच परियोजना (1999) भर्चुअल वास्तविकता भिडियो गेमहरूको लागि 20 वर्ष पछि दोहोर्याइएको छ। ब्लेयर डाइच पहिलो-व्यक्ति डरावनी खेल हो जसमा खेलाडी डरलाग्दो जंगलमा डुबेको छ। उनको मात्र कम्पनी: हाम्रो वफादार कुकुर बुलेट, एक टर्च र, निस्सन्देह, एक भिडियो क्यामेरा।
यो खेल, अहिले लगभग सबै कन्सोलहरूमा उपलब्ध छ, विधाका विशेषज्ञहरूले के कल गर्छन् भन्ने उत्कृष्ट उदाहरणहरू मध्ये एक हो। बाँच्नको त्रास। चलचित्रका फ्यानहरूका लागि, यो बुर्किट्सभिल, मेरील्याण्डको जंगलमा फर्किनेछ। यसपटक बालक बेपत्ता भएको विषयमा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले…
ब्लेयर विचको एउटा उल्लेखनीय विशेषता यो हो कि यसले खेलाडीलाई वैकल्पिक अन्त्यहरूको श्रृंखला प्रदान गर्दछ। यस तरीकाले, तपाईं एकरसतामा नपरिकन, भविष्यवाणी गर्न सकिने प्रतीक्षा नगरी बारम्बार खेल्न सक्नुहुन्छ।
घुसपैठिए: लुकाउनुहोस् र खोज्नुहोस्
एक स्पेनिश टिकट संग भर्चुअल वास्तविकता डरावनी खेल
स्पेनमा सिर्जना गरिएको यो खेललाई सूचीमा समावेश गर्नु उचित थियो। घुसपैठिए: लुकाउनुहोस् र खोज्नुहोस् विवरणको लागि धेरै माया र ठोस कथानकको साथ डिजाइन गरिएको खेल हो, जुन दृश्य प्रभावहरू र "डराउने" को पक्षमा प्राय: बिर्सिने कुरा हो।
कथा विधा भित्र एकदम क्लासिक छ: देशको एउटा घरमा परिवार पलायन जुन दुःस्वप्नमा परिणत हुन्छ। घर कतैको बीचमा छ, सभ्यताबाट टाढा छ। यसरी, यो दुर्गम स्थान तीन निर्दयी र खतरनाक अपराधीहरूको घेराबन्दीको वस्तु हुनेछ। तर यो सामान्य अपराधको बारेमा होइन, यो सबै हिंसाको पछाडि लुकेको भयानक रहस्य छ।
घरको वातावरण एक असहनीय तनावको साथ चार्ज गरिएको छ कि भर्चुअल वास्तविकताको चमत्कारले हामीलाई आफ्नै शरीरमा अनुभव गराउँछ। विसर्जनको अनुभूति उल्लेखनीय छ। यो सबै बनाउँछ घुसपैठिए: लुकाउनुहोस् र खोज्नुहोस् डरावनी प्रेमीहरूको लागि वांछनीय विकल्प भन्दा बढी।
निवासी ईविल एक्सएनएमएक्स: बिहाहार्ड
रेसिडेन्ट EVil 7: Biohazard उत्कृष्ट VR डरावनी खेलहरूको सूचीमा आफ्नै अधिकारमा छ
धेरैको विचारमा, आज त्यहाँको उत्कृष्ट VR डरावनी खेलहरू मध्ये एक हो। र यो त्यो हो, चिच्याहट र डर भन्दा पर, निवासी ईविल एक्सएनएमएक्स: बिहाहार्ड भर्चुअल वास्तविकताको सन्दर्भमा हामीलाई सबैभन्दा विस्तृत र प्राप्त अनुभवहरू प्रदान गर्दछ।
खेलाडीले एथन विन्टर्सको जुत्ता लगाउँछ, जसले मियालाई खोज्छ, उसको हराएको छोरी, उसलाई विकिरणले दूषित दलदलको छेउमा छोडेको घरमा लैजान्छ। निस्सन्देह, यो राक्षसी प्राणीहरू, असम्भव दुःस्वप्न प्राणीहरूको वासस्थान हो।
निवासी ईविल सागाका प्रशंसकहरू तेस्रो व्यक्तिमा खेल्न प्रयोग गरिन्छ। यही कारणले गर्दा यो संस्करणको नयाँ दृष्टिकोणले प्रमुख विचलन, नियमहरूमा परिवर्तनलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसका बावजुद, दुबै टोन र लय र गेमप्ले तत्वहरू फ्रान्चाइजीको भावनामा सत्य छन्। थप रूपमा, तर्क पनि धेरै राम्रोसँग काम गरिएको छ ताकि सबै कुरा मिल्छ। निश्चित रूपमा, निवासी ईविल 7: बायोहाजार्ड सेटहरू अस्तित्व डराउने खेलहरूमा नयाँ माइलस्टोन।
Exorcist: Legion सायद सबै भन्दा राम्रो VR डरावनी खेलहरू मध्ये एक हो
निस्सन्देह आज सम्म सिर्जना गरिएको सबैभन्दा डरलाग्दो भर्चुअल वास्तविकता खेलहरू मध्ये एक। अन Exorcist: Legion ठूलो चैपलमा हुने अनौठो घटनाहरूको श्रृंखला पछि जवाफहरूको खोजीमा खेलाडीले अन्वेषकको भूमिका ग्रहण गर्नुपर्छ। खेल उत्कृष्ट हलिउड डरावनी चलचित्रहरूको लागि योग्यको अन्तिम क्षणमा परिणत हुने एपिसोडहरूको शृङ्खला मार्फत अगाडि बढ्छ।
Exorcist VR को सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्षहरू मध्ये एक यसको उत्कृष्ट ध्वनि डिजाइन हो। खेल खेल्दा, हामी आवाजहरू सुन्न सक्छौं जुन हाम्रो आफ्नै टाउकोबाट आएको जस्तो देखिन्छ र जुन शक्तिशाली 3D स्थानिय अडियोको प्रयोग मार्फत हामीलाई घेर्छ। ग्रन्टहरू, ठूला-ठूला स्वरहरू, र अन्य डरलाग्दो आवाजहरू हाम्रो दिमागमा के हुने छ भनेर चेतावनीको रूपमा प्रतिध्वनित हुन्छन्।
यो खेलले हामीलाई प्रदान गर्ने VR साहसिक तनावपूर्ण क्षणहरू र चिसो दृश्यहरूले भरिएको छ। यसको अवधि अपेक्षाकृत छोटो छ, तर यसले हामीलाई प्रदान गर्ने अनुभव तीव्र छ।
द हिड्ने मृत - संत र पापीहरू
द वाकिंग डेड - सेन्ट्स र सिनरहरूमा पहिले भन्दा बढी वास्तविक र रेभेनस जोम्बीहरू
कन्सोलहरूको लागि भर्चुअल वास्तविकतामा हाम्रो मनपर्ने आतंकहरूको सूचीबाट जोम्बिजहरू हराउन सकिँदैन। द वाकि De डेड: संत र पापीहरू लोकप्रिय टिभी शृंखलाबाट प्रेरित यस गाथामा नयाँ ट्विस्ट छ। यो खेलको बारेमा के भन्नु हुन्छ? यसको ग्राफिक्स प्रभावशाली छन् र गेमिङ अनुभव मात्र भारी छ।
गेमप्ले राम्रोसँग परिचित छ: यसमा वाकरहरूलाई कुनै पनि हालतमा बेवास्ता गर्ने प्रयास गर्नु समावेश छ, तर आवश्यक पर्दा उनीहरूसँग लड्ने। यो अरू केही जस्तै डरलाग्दो बाँच्ने साहसिक कार्य हो। धेरै रगत र धेरै हिम्मत संग। VR संस्करणमा, खतरा र त्रासको भावना गुणा बढ्छ, जसले खेलाडीलाई सतर्कताको स्थायी अवस्थामा रहन बाध्य पार्छ।
दिउँसो सम्म: रगतको रस
के तपाई साँच्चै डराउन चाहनुहुन्छ? बिहानसम्म खेल्ने हिम्मत गर्नुहोस्: ब्लड रश
PS4 मा सबैभन्दा लोकप्रिय खेलहरू मध्ये एक, साथै एक वास्तविक दुःस्वप्न। परम्परागत संस्करणमा खेल पहिले नै थाहा भएकाहरूका लागि, दिउँसो सम्म: रगतको रस कथानक र गेमप्लेको सन्दर्भमा ठूलो समाचार प्रदान गर्दैन। यद्यपि, अब VR संस्करणमा यथार्थवादको भावना स्तब्ध छ। हाम्रो मुटुको धड्कन हजारमा नपुग्दा केही समयको लागि खेल्न असम्भव छ।
पूरा खेल पूरा हुन लगभग3घण्टा लाग्छ। के यो थोरै स्वाद छ? एकभन्दा बढीलाई यो पनि अति नै देखिन्छ, किनकि हृदयघात हुने वा कुनै किसिमको मानसिक असन्तुलनबाट पीडित हुने खतरा हुन्छ।
अतिरञ्जनहरू बाहेक, रश अफ ब्लडका धेरै गुणहरू हाइलाइट गर्न आवश्यक छ। खेलमा असाधारण ग्राफिक्स गुणस्तर र वरपरको आवाज छ जसले तपाईंको कपाललाई अन्तमा खडा बनाउँछ। कथा स्पष्ट रूपमा मूल खेलमा आधारित छ प्रिक्वेल वा यसको सिक्वेल बन्न बिना। के तपाइँ यसलाई प्रयास गर्ने हिम्मत गर्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » खेल » कन्सोलहरूमा रमाइलो गर्न डराउने VR खेलहरू